परिमार्जन गर्ने शर्तपछि काँग्रेसको नियमावली पारित – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Jul 15, 201940
काठमाडौं । काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठेका विवादलाई पछि सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी पार्टी नियमावली पारित गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा असार २२ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकले मस्यौदामाथि उठेका असन्तुष्टिलाई पछि समेट्ने गरी सर्वम्मतिले नियमावली पारित गरेको हो ।
साथै बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूका सुझाव समेट्न मस्यौदा समितिलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा लेबी, अनुशासनको कारबाहीमा कडा प्रावधान, भातृ संस्थामा पार्टीका अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समानान्तर शैलीमा चलाउन खोजेको जस्ता विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नियमावलीको नियम २७ को (च) मा ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ अनुशासनको उल्लंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति संस्थापन इतर पक्षले विमत्ति जनाएको हो ।
आइतबारको बैठकमा २१ जना केन्द्रीय सदस्यले नियमावलीका प्रावधानमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसअघि शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसिहत १८ जनाले आफ्नो धारण राखेको थिए ।
धारणा राख्ने क्रममा संस्थापन पक्षले नियमावलीका प्रावधानमा उभिए । यता पौडेल र सिटौला पक्ष विपक्षमा देखिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका थिए, ‘खुलापना र स्वतन्त्रता काँग्रेसको सुन्दरता हो । आलोचनात्मक चेतलाई अनुशासनको नाममा नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । भातृ संस्थाहरुलाई पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने गरी नियमावली संशोधन गराउछौँ ।’
यस्तै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीका गलत कामको विरोध गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । लोकतान्त्रिक पार्टी ‘रेजिमेन्ट’ चरित्रबाट चल्न नसक्ने सिटौलाको भनाइ थियो ।
आचारसंहिताका प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासन उल्लंघन सरहकै कारबाही गर्ने हो भने पार्टीमा कोही नेता तथा कार्यकर्ता जोगिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘आचारसंहिता र अनुशासन भनेका फरक व्यवस्था हुन् । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेबित्तिकै अनुशासनको कारबाही हुने भए यो पार्टीमा को रहन्छ ? सबै कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘समयमै लेबी नतिर्ने पनि कारबाहीमा पर्ने भए । यो लोकन्त्रिक पार्टीको चरित्रभित्र पर्दैन ।’
पौडेल, सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामकृष्ण यादवसहितका नेताले मस्यौदामा लेबीसहितका विषयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जोडदार माग थिए ।
तर, संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण समितिका संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, अर्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेता नियमावलीको पक्षमा उभिएका थिए ।
उनीहरुले पार्टीभित्र मौलाएको ‘छाडापन’को अन्त्यका लागि यस्तो नियम आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्तावित प्रावधानको समर्थन गरेका थिए ।
केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर संस्था जस्तो बनाउन खोजिएको केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बताएका थिए ।
आचार्यले भने, ‘अहिले पो शेरबहादुरजी र विमलेन्द्रजीबीच एकता छ । भोलि निर्वाचित भएर आउँदा सभापतिसँग कुरा नमिल्न सक्छ, त्यतिबेला प्रतिष्ठानले समानान्तर संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्छ ? यो कुरामा ख्याल गर्ने जरुरी छ । यो प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर बनाउन सक्ने गरी शाखा खोल्ने अधिकारसहितको प्रावधान सच्याउनुपर्छ । होइन भने भोली समस्या हुन्छ ।’
प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्लामा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थासहितको प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ ।
संयोजक लेखकले प्रस्तावित आचारसंहिता, लेबी र प्रतिष्ठानको शाखा खोल्ने प्रावधानलगायत बैठकमा उठेका विषयहरूमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । नयाँ स्वरूपमा पार्टी संगठन चलाउन अनुशासन हुनुपर्ने र लेबी पनि उठाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
साउन ७ गतेसम्म बैठक स्थगित
यसैबीच, अविरल वर्षा र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै केन्द्रीय समिति बैठक ७ साउनसम्म स्थगित गरी उद्धार र राहतमा समर्पित हुने निर्णय काँग्रेसले गरेको छ ।
नेता सिटौलाले बैठक स्थगित गरेर राहत तथा उद्दारमा जुट्ने प्रस्ताव राखेका थिए । लगातारको वर्षाले निम्त्यको विपतीबाट प्रभावितहरुको राहत तथा उद्दारमा जुट्न सिटौला राखेको प्रस्ताव अनुसार बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा उद्दार तथा राहतमा संलग्न हुन आह्वान
प्रचण्ड कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे टाउकाे दुःखाई
ओलीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, हस्ताक्षर संकलन सुरु
पश्चिमी देशहरूले इस्लाम, मुस्लिम र पैगम्बरलाई बुझ्न सक्दैनन्: इमरान खान
नेकपा अध्याक्षद्वाेय केपी र प्रचण्ड बीच बोलचाल बन्दले कार्यकर्ता निरास
काठमाडौँ महानगर प्रमुखकी छोरीले गरिन् ‘प्लाज्मा दान’
हाेम आइसाेलेसनमा २ जनाकाे मृत्यु
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरवासीले स्वयम् घोषणा फारम…
होन्डा साइन नेपालमा धेरै बिक्री
प्रचण्ड कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे टाउकाे…
कर संकलन गर्न डिजिटल प्रणाली
‘प्रचण्ड’को हत्या गर्न ‘गोयल’को गोप्य भेटवार्ता भएको त होइन
पर्यटन बचाउन दुईदिने बिदा कार्यान्वयनको माग
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १५:२७
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १५:०९
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १४:२५